Inkastoo barbaro goolal la’aan ah ay la galeen Seville… Lampard oo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka Chelsea – Gool FM
RASMI: Louis van Gaal oo markii saddexaad loo magacaabay Tababaraha xulka qaranka Netherlands
(London) 21 Okt 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedkii kooxda ee kulankii Sevilla bilowgii ololahoodii wareega group-yada ee tartanka Champions League.
Garoonka Stanford Bridge ee dhaca Galbeedka caasimada Ingiriiska ee London, ayaa xalay martigaliyay kulanka labada koox, kaasoo ku dhamaaday barbaro goolal la’aan ah.
Wargeyska “Marca” ayaa daabacay hadalada tababare Frank Lampard uu shegay kaddib ciyaarta, wuxuuna yiri:
“Waxaan ku jirnaa bilowga xilli ciyaareedka, waxaana sameyn doonaa horumar fiican, waxay ahayd wax fiican inaan ciyaarta kaga baxno shabaq oo nadiif ah, waxaan sii wadi doonnaa inaan u dhaqaaqno talaabo talaabo”.
“Natiijadu waa mid wanaagsan, waana fahansanahay baahida loo qabo in natiijo fiican la gaaro bilowga kulamada group-yada. waxay ahaayeen koox fiican, waxayna ahayd ciyaar weyn”.
“Waan ku faraxsanahay natiijada barbardhaca ee goolal la’aanta ah, waxay ahayd mid aad muhiim u ah in laga baxo ciyaarta iyadoo aan wax goolal ah la iga dhalin”.
“Waxaan kala hadlay ciyaartoyda ciyaarta maamulkeeda, falcelintooduna waxay ahayd mid aad u fiican. Seville waa koox heerka koowaad ah, waxaanan qaadanay go’aano badan ee wanaagsan oo lagu dhisi karo”.